Finlaystone Barns ubumnandi bokuzenzela ukutya - I-Airbnb
Finlaystone Barns ubumnandi bokuzenzela ukutya
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguArthur
Isicwangciso sanamhlanje esivulekileyo sangaphakathi kwindawo yokugcina i-oki enefreyimu ebekwe kwindawo entle yelizwe kufutshane neGlasgow kwaye ejonge uMlambo iClyde. Hamba ngeshawa, izibonelelo zekhitshi ezigcweleyo kunye nomatshini wokuhlamba. I-TV kunye ne-wifi. Ukufikelela kwiigadi ezisesikweni kunye namathafa emithi. Izilwanyana zasekhaya zamkelekile.
Le ndlu inefenitshala kwaye ixhotyiswe kumgangatho wobunewunewu.
IFinlaystone Estate inohambo olude lwamaplanga kunye neegadi ezintle kwaye yimizuzu nje engama-20 ukusuka eGlasgow kunye nemizuzu engama-30 ukusuka eLoch Lomond.
Ishedi ikumgangatho ongasentla wesakhiwo i-Oak Framed kwaye ivakala ngathi yindlu enkulu. Isicwangciso esivulekileyo esisekiweyo sisinika ukuziva okuvulelekileyo. Inebhedi enkulu e-1 enkulu kunye nebhedi yesofa inokwenzelwa undwendwe olongezelelweyo. Isanda kwakhiwa, esi sakhiwo sigqunywe kakuhle kwaye sicocekile kodwa kukho isitovu esibaswa ngamaplanga sokufudumala okongezelelekileyo kunye nokufudumeza kombane.
Ukuba unobunzima kwizitepsi okanye ufuna ishedi enkulu sinoluhlu olwahlukileyo kumgangatho ophantsi olungathatha abantu aba-2 ukuya kwaba-6 kwisitayile esifanayo.
Iintsuku eziyi-7 e Langbank
4.66 · Izimvo eziyi-35
I-Estate yimizuzu engama-20 ukusuka eGlasgow kwaye malunga nemizuzu eyi-12 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya, nokufikelela ngokulula kwiindawo ezinjengeLoch Lomond malunga nemizuzu engama-30 kude. I-Edinburgh yimizuzu engama-60 ngemoto ekubalekeni okucacileyo ngoko sisisiseko esihle seentsuku ezimbalwa zokhenketho lwaseScotland.
Iikhosi zegalufa ezikumgangatho wehlabathi eTroon, Prestwick, Gleneagles kunye neLoch Lomond zonke zikwisithuba seyure yokuhamba kwaye iziqithi zaseBute naseArran zikufutshane nazo.
Umbuki zindwendwe ngu- Arthur
Sineziko labatyeleli kwi-estate ekufutshane neeshedi. Ukuba unayo nayiphi na imiba ngoko ungasoloko unxibelelana nomntu apho emini. Kungenjalo nceda uqhagamshelane nam ngalo lonke ixesha (Inombolo yomnxeba ifihlwe ngu-Airbnb)
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Langbank